Monday September 18, 2017 - 10:19:01 in Wararka by Super Admin
Dagaallo u dhaxeeya qabaa’illada Soomaalida iyo Oromada ayaa lagasoo sheegayaa deegaanno hoos yimaad magaalada Harar ee ixtilaalka kujirta.
Sarkaal katirsan dowladda Itoobiya ayaa warbaahinta u sheegay in dhimashada weerarkii (Hawaday) ay gaartay 100 qof islamarkaana ay dhaawacmeen dad kabadan 45 qof, Meydadka 67 qof ayaa xabaal wadareed loogu sameeyay magaalada Jigjiga ee xarunta dhulka Soomaaligalbeed.
Meydad hor leh oo lagasoo aruuriyay deegaanka Hawaday ayaa lageeyay dhulka Soomaalida ee gumeysiga kujira, sidoo kale tobanaan katirsan dad Oromada ayaa Meydadkooda lageeyay duleedka magaalada Addis Ababa halkaas oo lagu aasay.
Dowladda Itoobiya ayaa dhankeeda sheegtay in ciidamo kumanaan askari ay udirtay deegaanada lagu dagaallamayo waxaana laga cabsi qabaa in ciidamadaasi sii huriyaan colaadda u dhaxaysa qabaa’iilada muslimiinta ah.
Siyaasiyiin katirsan kooxaha Mucaaradka Qowmiyadda Oromada ayaa warbaahinta u sheegay in dhibaatada ka dhax taagan Soomaalida iyo Oromada ay mas’uul ka tahay dowladda Itoobiya "Rajiimka Tigreega ayaa gadaal kasoo riixaya colaadda ka dhax taagan qowmiyadaha walaalaha ah ee Oromada iyo Soomaalida, dhibaatadu waxay timid kadib markii dowladda Itoobiya ay Maleeshiyaadka Liyuu Booliska u dirtay Oromia si ay u xasuuqaan dadka kacdoonka wada taas oo colaadda kicisay” ayuu yiri sarkaal katirsan mucaaradka.
Cabdi Muxamed oo Cabdi ileey ku magac dheer waa madaxweynaha maamulka isku magacaabay Dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya wuxuu aaminsanyahay in dadkii soomaalida ahaa ee lagu laayay duleedka magaalada Harar uu ahaa mid ay soo abaabuleen wax uu ugu yeeray Argagaxiso!.
Ninkan dabadhilifka ah oo mas’uul ka ah Maleeshiyaadka soomaalida ee xasuuqa ka wada gobolka Oromiya ayaa ugu baaqay xukuumadda Addis Ababa in ay tallaab ka qaaddo dadka Oromada oo uu ku sifeeyay Argagaxiso.
Aqoonyahanada Muslimiinta Itoobiya ayaa aaminsan in Itoobiya ay laba hadaf oo aas-aasi ah ka leedahay daad gureynta Maleeshiyad Liyuu Booliska ee gobolka Oromiya, hadafka koowaad ayaa ahaa in maleeshiyaadkan calooshood u shaqeystayaasha Manaxayaasha ah ku damiso kacdoonka qowmiyadda Oromada bilaawday sanaddii 2016, hadafka 2-aad ayaa ah in ay qoorta isku geliyo soomaalida iyo Oromada oo ah muslimiinta ugu badan ee ku dhaqan wadanka loo yaqaan Itoobiya.
Taariikhda waxaa ku cad in isgarabsi iyo is walaaleysi soo jireen ah uu u dhaxeeyay soomaalida iyo Oromada islamarkaana dowladihii soomaaliya ay dhanka melleteriga iyo siyaasadda ka taageeri jireen jabhadaha Oromada ee ku kacdoonsan Nidaamka Itoobiya, cilaaqaadkaas soo jireenka ah ayuu Taliska Tigreegu doonayaa in uu kala geeyo.
Qowmiyadda Oromada oo Cadadkooda lagu qiyaaso 45 Milyan Badankeed waa muslimiin waxaana kusoo xiga Soomaalida sidaas daraadeed taliska Tigreega wuxuu doonayaa in muslimiintu dhaxdooda isku mashquulaan si uu usii wato damaciisa gumeysi.